Uphendlo lukaGoogle oluDuduzayo lwenze ukuba ndiKhubazeke! | Martech Zone
NgeCawa, Oktobha 26, 2014 Lwesine, Matshi 25, 2021 Douglas Karr
Sisebenze imini nobusuku silungiselela iMartech ngenguqu ezayo yoyilo. Umsebenzi ubandakanyile ukubuyela umva nge-4,000 yezithuba zebhlog -Ukuqinisekisa ukuba sinemifanekiso, umxholo awuphelelwe lixesha (njengamaqonga aphumileyo kwishishini), kunye nokuqinisekisa ukuba asinazo ezinye iingxaki ezingaqhelekanga… njengezithuba ezili-100 Ndidibanise i-html encoding yeekhowudi, kunye nokunye okuninzi. Siphinde senza uphicotho lwe-backlink kwaye sahambisa itoni yeendawo zogaxekile ezingathandekiyo ezazisalatha kuthi.
Olunye uphuculo olongezelelekileyo kukuba sifake i Isitifiketi seS SSL ekulungiseleleni ezinye izizukulwana ezikhokelayo kunye nokukhetha i-ecommerce siza kongeza kule ndawo. Ungayichazanga eyokuba uGoogle ubonise ukuba indawo ekhuselekileyo inokuba nefuthe elihle kwizikhundla ezizayo. Zonke iinguqu endizenzileyo ngokuqinisekileyo zibe nefuthe. Ngapha koko, kwinyanga ephelileyo i-injini yokukhangela yethu iphindwe kabini. Nantsi skrini evela Semrush:
Ngokwenyani asinalo ixesha elininzi lokusebenza kwiMartech ngolu hlobo kuba sisebenza ukuqinisekisa ukuba zonke iisayithi zabaxumi bethu zilungiselelwe. Njengenxalenye yenkqubo yethu, bendisebenzisa izixhobo ezininzi ukukrwela indawo ekhangela imicimbi, kwaye ndilungise imicimbi ethile engaqhelekanga Ikhonsoli ye Khangela yeGoogle ityhile… njengezihloko eziphindiweyo, njl.
Ke… khawuthelekelele indlela ebengasabela ngayo xa ndingena Ikhonsoli ye Khangela yeGoogle kule veki ndikubonile oku:
Ndikhangele iimpazamo kwii-Webmasters kwaye iimpazamo beziphantsi kakhulu. Ndijongile ndaphinda ndayijonga eyam Uluhlu lokujonga lwe-CMS SEO -Ifayile yeerobhothi.txt, iimephu zam zekhaya, ukuphinda ndikukhokele… yonke into! Ndikhangele nayiphi na imiyalezo (umzekelo, isohlwayo) kwaye bekungekho miyalezo ithunyelwe kum. Nangona ndikhululekile, andinakunceda kodwa ndizibuze ukuba ngaba kukho into engahambanga kakuhle kwi-Webmasters.
Kwaye emva koko yeza kum… kuthekani ukuba I-Google Search Console ifuna indlela ekhuselekileyo kwisiza? Ndiye ndabhalisa ke https: //martech.zone ngaphandle kwe http://martech.zone. Ngokwenyani khange kufuneke nditshintshe i-header tag. Nantsi into evelileyo:
UGoogle… woyikisile kwaphela ukungabikho kwam. Ndacinga ukuba ndenze into embi kwindawo yam kangangokuba ndandithintela ukukhangela konke. Wowu!
tags: I-google webmastersizixhobo zewebhu zeGooglehttp seohttps seoIinqununu ze-httpsloo non-sslseo sslssl xa kuthelekiswa non-ssl seossl abaphathi bewebhuizixhobo zewebhuWebmasterabaphathi bewebhu httpsabaphathi bewebhu ssl